Waxbarashada: Caqabadaha ku jira xaaladaha isku dhaca - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
[Oktoobar 31, 2021] 31 Maalmood oo Caalamka Looga Dabaal Degay Si Nabada iyo Cadaalada Loo Hormariyo Dhacdooyinka & Shirarka
Waxbarashada: Caqabadaha ku jira xaaladaha isku dhaca
Wax ka qabashada xagjirnimada rabshadaha leh waxay u baahan tahay wax ka qabashada baahiyaha waxbarashada iyo shaqada.
(Waxaa daabacay: Hay'adda Gargaarka Gargaarka Bani'aadanimo. Luulyo 8, 2021)
Bishan, HART waxay diiradda saareysaa caqabadaha hortaagan waxbarashada waddamada aan saaxiibka nahay iyo sida shuraakadayada ay u doonayaan inay wax uga qabtaan.
Weerarada argagixiso ee ka dhanka ah bartilmaameedyada waxbarasho ayaa kordhay sannadihii la soo dhaafay. Kooxaha argagixisada ee ku sugan Koonfurta Aasiya iyo Afrika, oo ay ku jiraan Boko Xaraam ee Nigeria, Talibanka Afgaanistaan, iyo kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida ee Suuriya iyo Ciraaq, ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya weerarada ay ku qaadayaan xarumaha waxbarashada iyagoo ah aalad argagaxiso, ama waxay la wareegeen xarumihii waxbarashada kor u qaadaan 'summadooda' xagjirnimada.[i] Sanadihii la soo dhaafay, tirada sii kordheysa ee weerarada ka dhanka ah dugsiyada iyo afduubka ardayda ee kooxaha xagjirka ah ee xagjirka ah ee Nigeria ayaa si weyn loo baahiyay.
Waa maxay sababta Hay'adaha Waxbarashadu u bartilmaameedsan yihiin?
Iskuulada, kulliyadaha iyo jaamacadaha ayaa marka la barbardhigo bartilmaameedyada 'jilicsan' halkaas oo dad badani isugu yimaadaan. Waxaa si isa soo taraysa loo ilaalinayaa dhismayaasha militariga, dowladda iyo kuwa rayidka. Taa bedelkeeda, hay'adaha waxbarashadu aad bay u yar yihiin, way u nugul yihiin waxayna leeyihiin qiime astaan ​​ah maadaama inta badan loo arko inay 'matalaan' dawladda. Weerarada lagu qaado dugsiyada waxay leeyihiin qiime 'argagax' oo sarreeya waxayna kordhiyaan sumcadda kooxaha mintidiinta.
Laakiin sidoo kale waxaa jira sababo fikradeed. Boko Xaraam ee Nayjeeriya iyo kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida ee Suuriya iyo meelo kaleba waxay aaminsan yihiin in waxbarashada cilmaaniga ah ee reer galbeedku ay kharribto bulshada Islaamka oo ay lid ku tahay aragtidooda caqiidada. Dhab ahaantii, ereyada 'Boko Haram' ayaa qiyaastii loo tarjumi karaa "Waxbarashada reer Galbeedka waa mamnuuc".
Maxaa xagjiriinta Islaamku u neceb yihiin Waxbarashada Reer Galbeedka?
Islaamiyiin badan ayaa u tixgeliya waxbarashada reer galbeedka, oo inta badan ay soo bandhigaan adeegayaasha Masiixiyiinta ah, inay tahay 'soo dejin' diimeed gumeysi reer galbeed ah oo kharribaysa caqiidada Islaamka iyo qiyamka 'dhaqameed' waxayna raadsadaan inay ku laabtaan waxbarashada diineed ee 'saafiga ah'.
Si kastaba ha ahaatee, markii la dabaqay oo la waafajiyay dhammaan dhaqammada, waxbarashada casriga ah mar dambe looma tixgelin karo soo dejin 'galbeed'. Si kastaba ha ahaatee waxaa loo arkaa inay tahay halista ugu weyn ee ku wajahan fikirka ka -reebista kooxaha xagjirka ah. Prof Boaz, Dean oo ka tirsan Dugsiga Lauder ee Dowladda, Diblomaasiyadda iyo Istiraatiijiyadda ayaa qoray: “Argaggixisadu waxay si buuxda u fahmeen in waxbarashada nabadda, xuquuqda aadanaha, dadka laga tirada badan yahay iyo xuquuqda haweenka inta ay le’eg yihiin qiyamka dimoqraadiyadda iyo xorriyaddu ay ka hor imanayaan farriimahooda waxayna halis weyn ku yihiin dadaallada xagjirinta ee socda. Haddii ay xiri karaan waxbarashada iska soo horjeedda, waxay ku gaari doonaan kelidii maskaxda mustaqbalka. ”
“Argaggixisadu waxay si buuxda u fahamsan yihiin in waxbarashada nabadda, xuquuqda aadanaha, dadka laga tirada badan yahay iyo xuquuqda haweenka sida dimuqraadiyadda iyo xorriyadda ay ka hor imanayaan farriimahooda waxayna halis weyn ku yihiin dadaalladooda xagjirnimada ee socda. Haddii ay xiri karaan waxbarashada iska soo horjeedda, waxay ku gaari doonaan kelidii maskaxda mustaqbalka. ”
Waxaa lagama maarmaan ah in kastoo la kala saaro rabshadaha diimeed iyo kuwa siyaasadeed. Xagjirnimada badankeeda waxay salka ku haysaa aragtida caddaalad -darrada iyo faquuqa.[ii] Xaaladaha saboolnimada iyo caddaalad -darrada ayaa noqda saldhigga ay xiisadaha diimeed iyo diimeed lagu maareyn karo kuna kori karaan. Warbixinta Tusaha Argagixisada Caalamka ee 2013 (p.68) waxay tilmaamaysaa laba arrimood oo si dhow loogu aqoonsaday falalka argagixisada: rabshado siyaasadeed oo ay dawladdu samaysay iyo jiritaanka iskahorimaadyo hubaysan oo ballaadhan. "Xiriirka ka dhexeeya labadan arrimood iyo argaggixisannimada ayaa aad u xooggan oo in ka yar 0.6 boqolkiiba dhammaan weerarrada argagaxiso ay ka dhaceen dalal aan lahayn khilaaf joogto ah iyo nooc kasta oo argagax siyaasadeed ah."[iii] Shaqo la, aanta dadka aqoonta leh ee ku nool wadamada aan siyaasad ahaan xasilin waxay sare u qaadeysaa halista xagjirnimada dadka aqoonta leh.
Wax ka qabashada xagjirnimada rabshadaha leh waxay u baahan tahay wax ka qabashada baahiyaha waxbarashada iyo shaqaalaynta, taasina waa sababta ay diiradda ugu weyn u tahay inta badan la -hawlgalayaashayada. Wax ka qabashada heerka ka-bixidda sare waxay noqon kartaa tallaabada ugu horreysa ee lagu yareynayo qorista dhallinyarada ee xagjirnimada rabshadaha leh. Sidoo kale, helitaan la'aanta waxbarashada tooska ah ayaa carruurta ka dhigaysa kuwo u nugul qorista iyo xagjirnimada. Bixinta waxbarashada iyo dhiirrigelinta bulshooyinka saboolka ah, halkaas oo dugsiyo ammaan iyo kaabayaal badbaado u leh carruurta (lab iyo dheddig) iyo shaqaalaha, kuwaas oo fikirka muhiimka ah, isboortiga, xirfadaha nolosha iyo doorka qoyska iyo bulshada ay ku jiraan manhajka, beddelayaan bulshooyinka oo ay bixiyaan xasiloonida.
HART waxay ku faantaa inay ku lug leedahay mashaariic waxbarasho dhammaan waddamada aan bahwadaagta nahay. Dhowr bilood ka hor, wehelkayaga Suudaan, Benjamin Barnaba, oo ka hadlaya aag ay si aad ah u saameeyeen iskahorimaadyadu, ayaa yiri: “Marka laga reebo HART ee Buuraha Nuba ma jirto hay'ad kale oo waddaniyadeed ama caalami ah ama Qaramada Midoobay oo awood u leh inay bixiso wax kasta oo waxbarasho ama waxbarasho ah ama wax la xiriira waxbarashada. Adiga ayaa ah mashruuca kaliya ee dhulka ka jira oo qof walba ku tiirsan yahay. ”
[i] Xuseen Xuseen. Isbahaysiga Caalamiga ah ee Waxbarashada ka ilaaliya weerarka. Maxay argagixisadu u weeraraan waxbarashada. https://protectingeducation.org/news/why-terrorists-attack-education/ 22 February 2016
[ii] Samantha de Silva. Doorka Waxbarashada ee ka hortagga xagjirnimada gacan ka hadalka ah. Warbixinta calanka ee wadajirka ah ee Bangiga Adduunka iyo Qaramada Midoobay “Wax-ka-qabadka Horumarintu ma Caawin Karaa Iska-horimaadka iyo Rabshadaha?”
# rabshadaha ku saleysan iskuulka
Ma gaajoonaysaa Taliban - mise dadka Afgaanistaan?
Jaamacadda California State Polytechnic waxay raadineysaa Shri Shantiath Kursiga Ku-xigeenka ee Daraasaadka Ahimsa (Daraasadaha Rabshadaha La'aanta)
Kulliyadda Dawson ayaa xustay sannad-guuradii 10aad ee toogashada
September 16, 2016 Warar & Muuqaal 0
Toban sano ka hor ayey ahayd markii nin hubaysan uu dhex galay Dawson College. Hal arday ayaa dhintey 19 kalena waa ay dhaawacmeen. Richard Filion, agaasimaha guud ee iskuulka, ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay in barnaamijkooda waxbarashadda Nabadda uu ka soo baxay rabshadaha noocaas ah, taasoo keentay in iskuulka uu xooga saaro sidii ardayda loogu hogaamin lahaa wadada nabada. [sii wad akhriska…]
Ku dhexgalida Caafimaadka Maskaxda iyo Goobaha Waxbarashada La Dagaalanka Xagjirnimada Rabshada
Sideen ugaqeyb qaadan karnaa xirfadlayaal caafimaadka maskaxda iyo dhinacyada waxbarashada si looga hortago xagjirnimada rabshadaha wata? Ma jiraan casharro laga barto noocyada kale ee barnaamijyada faragelinta?
Kordhinta feejignaanta ayaa loo jiheeyay baahida loo qabo in la ballaariyo doorka daryeelka caafimaadka maskaxda ee ka hortagga xagjirnimada rabshadaha wata. Ku darista caafimaadka maskaxda iyo goobaha waxbarashada ka hortagga xagjirnimada rabshadaha leh waxay leedahay awood weyn oo lagu xoojinayo awooda ka hortagga iyo wax ka qabashada. Si kastaba ha noqotee, si wax ku ool ah in loo sameeyo waxay u baahan tahay faham wanaagsan oo ku saabsan sida loola heshiiyo hantida iyo xaaladaha ka imanaya waxbarashada iyo caafimaadka maskaxda ee baahida CVE iyo xaaladaha jira. [sii wad akhriska…]
Qaab nabadeed u dhiska barista xagjirnimada
December 3, 2015 opinion 0
(Maqaalka asalka ah: David J. Smith, Huffington Post, Dec. 2, 2015) Weerarradii ugu dambeeyay ee ka dhacay Paris iyo meelo kale waxay na xusuusinayaan xasillooni darrada adduunka ka jirta ee aan inta badan u qaadanno. Ku [sii wad akhriska…] [sii wad akhriska…]